भर्खर महानर्कपालिका घोषणा भएको वीरगञ्जभन्सारले सबैभन्दा बढी राजस्व संकलनगर्दछ । तर बत्तीमूनि अध्ँयारो भने जस्तै त्यहीभन्सार वरिपरिका सडक खाल्डा, खुल्डी परेका र जिर्ण छन् । राजमार्गमा पर्ने यो भन्सार कार्यालयलाई आफ्नो अवस्थितिले आफैलाई लाजलागिरहेको होला? तर सरकार चलाउने जिम्मा लिएकाहरुलाई लाजभएपो लाग्नु ? कुनै बेला लालू प्रसाद यादवले आफु बिहारको मुख्यमन्त्रीबनेमा पटनाको सडकलाई फिल्मअभिनेत्री हेमामालिनीको गाला जस्तो बनाइदिने भनेकाथिए । हेमामालिनी त अब बुढी भैसकिन् । पटनाको सडक अहिले कुनअभिनेत्रीको गाला जस्तो थाहा छैन ।
अब छिट्टै यो देशमहानर्कमा परिणत हुंदैछ । त्यसैले मरेको साग्ँलोलाई ज्यूँदो कमिलाले तानेर पर पुर्याए जस्तै सरकार नामककमिलाले मरेका साँगला जस्ता फोहर र दूर्गन्धितशहरहरुलाई नर्कपालिका र उपमहानकपालिर्काबाट सोझै महानर्कपालिका घोषणा गर्ने महानकाम गरेको छ ।
त्यो पनिमधेशमानिर्वाचनहुनु केही अगाडि यहाँका केहीशहरलाई महानर्कपालिका घोषणा गरेर हर ऐरा, गैरालाई निर्वाचनमाउम्मेदवारी दिनहौस्याएको छ । अबभर्खर घोषणा भएकाशहरहरुको महानर्क पतिअर्थात मेयर बन्ने रहर त सबैलाई हुन्छ नै ।
त्यसैले हामी सबैलाई यीनयाँनवेलामहानर्कको वासिन्दाभएकोमाबधाई तथा स्वागत छ । मेट्रो सिटी को नागरिक हुनुको शाननै बेग्लै हुन्छ क्या । हिजोसम्मप्रजा र जनताहामीआजमहानर्ककावासिन्दा भएपछि सिंढी उक्लिएर नागरिक भएका छौं ।
त्यस्तानागरिक जो केहीगर्दैनन् मात्रगनगन गर्छन् जो म अहिले गर्दैछु । सरकारले कति सजिलैसितमहानर्कपालिका घोषणा गर्यो कियीनर्कमा बस्ने मच्छर, झिँगा, उपिँया र उडुसहरु जुर्मुराएर उठिसके हामीअयोग्यनागरिकको रगतचुस्न ।
अबनर्कपालिकामा यिनैको ढलिमली चल्ने त हो नि । नर्क पालिकामापदोन्नति भएपछि यहाँकाहामी जस्ता नागरिकले बढेको करलाई आँसु र रगतको मूल्यमातिर्नै पर्दछ । अचम्मलागिरहेछ महानर्कपालिकाबन्दैमायहाँकावासिन्दाको चुरीफुरी बढेको देख्दा? नर्कपालिका घोषणा भएकाशहरहरुमा न एउटा राम्रो ढल निकासको व्यवस्था छ ।
बर्खा याममा सडक र नदी छु्याउनगार्हो हुने गरी सर्वत्र जलमग्न हुन्छ । त्योबेलामहानर्कपालिकाका मच्छर जस्ता कर्मचारीहरु त्यहीपानीमा लुकेर बस्छन् । महानर्कपालिकाकाभित्री सडक र गल्लीहरु कुनै वयोवृद्धको गाला जस्तो चाउरी परेको र रुखो छ ।
प्रसव वेदनाले पीडित कुनै महिलालाई यही सडक भएर अस्पताल लग्नुपर्यो भने तिनले बाटोमै बच्चाजन्माउने छिन् । लोडसेडिगँ यिनै महानर्कपालिकामाचर्को छ । यहाँतमसो मा ज्योतिर्गमय हैन कि ज्योतिर्मा तमसोमय भैरहेको छ ।
तर कुनै कूलमानको आँखामालागेको उज्यालोको पट्टी खुल्दैन । देशको राजधानीमालोडसेडिगँ हटाए या कम गरे भनेर त्यहाँकानागरिक र मीडियाले कूलमानलाई कूल देउताबनाएर पूजा गरेका छन् । तिनै कूलमानयीभर्खर महानर्कपालिका घोषणा गरिएको शहरमाआएभने उनलाई उज्यालोको शत्रु मानेर डण्डाले आरतीउतार्नेछन् यहाँकानागरिकले । गर्नै पर्ने कामगर्दा पनि एक जनाकर्मचारीको देवत्वकरण गरिदैंछ ।
भर्खर महानर्कपालिका घोषणा भएको वीरगञ्जभन्सारले सबैभन्दा बढी राजस्व संकलनगर्दछ । तर बत्तीमूनिअध्ँयारो भने जस्तै त्यहीभन्सार वरिपरिका सडक खाल्डा, खुल्डी परेका र जिर्ण छन् ।
राजमार्गमा पर्ने यो भन्सार कार्यालयलाई आफ्नो अवस्थितिले आफैलाई लाजलागिरहेको होला? तर सरकार चलाउने जिम्मालिएकाहरुलाई लाजभएपो लाग्नु ?कुनै बेलालालूप्रसादयादवले आफु बिहारको मुख्यमन्त्रीबनेमा पटनाको सडकलाई फिल्मअभिनेत्री हेमामालिनीको गाला जस्तो बनाइदिने भनेकाथिए ।
हेमामालिनी त अब बुढी भैसकिन् । पटनाको सडक अहिले कुनअभिनेत्रीको गाला जस्तो थाहा छैन । तर हाम्रो दूर्भाग्यहाम्रो नर्कपालिकाका सडकहरु तिनै बुढी हेमामालिनीको गाला जस्तो पनि छैन । बढी तेल खाएर ढुल्किदैं भएपनि साना, ठूला सवारी साधनहरु यी खाल्डो जस्ता सडकमा चलेकै छन् ।
अनिकिनबनाउनु सडक बेकारमा?त्यो अलकत्रा बिछाउने पैसा आफ्नै घरमा बिछाउछन् सडक विभागकाकर्मचारीले । वीरगञ्जभन्सारमा संकलनहुने राजस्वमा सडक मर्मत सम्भार शिर्षकमा करोडौं रुपैंया उठछ तर त्यो उठेर फेरि कहाँ सुत्छ थाहा छैन कसैलाई ?
विकासको पहिलो शर्त नै सडक र बिजुीहो । तर हाम्रो देशमायीदुबै डायनासोर जस्तै भैसकेकाछन् । अनिकुनआधारमा सरकार बिनापूर्व तयारी वापूर्वाधार निर्माण नगरेर महानर्कपालिका घोषणा गर्दछ ? सरकारले आफ्नाकार्यकर्ता र हनुमानहरुलाई खाने मेसो बनाइदिएको मात्रहो महानर्क घोषणा गरेर ।
आखिरमायीकार्यकर्ताहरुको स्वभाव मच्छर जस्तै अरुको रगतचुस्ने नै छ क्यार ? न यीमहानर्कपालिका घोषणा गरिएकाशहरमा कुै राम्रो अस्पताल छ, न स्तरीय विद्यालय नै छ ।
एउटा सिनेमाहलसम्मअहिलेको जस्तो अत्याधुनिकपाराको छैन । तर सरकार छिमेकी देशको गाउँ, कस्बा र सानो नगर जस्तो ठाउँलाई महानर्कपालिकाबनाएर ठूलै उपद्रव गरेको भन्ठानिरहेछ । यीनर्कपालिकामा बस्ने गरीब नागरिकलाई करको बोझले कुप्रयाएर छिट्टै परमधामपुर्याउने मेलो मात्रहो यो ।
वाराको जीतपुर जस्तो गाउँलाई हाम्रो बुद्धिमान सरकारले उपमहानर्कपालिका घोषणा गरिसकेको छ । जितपुरको बीचमा पर्ने राजमार्गमाअवस्थित केही ठूला उद्योगहरु भन्दाबाहेक यहाँत्यस्तो के छ जसलेगर्दा जितपुरलाई महानर्कपालिका घोषणा गरियो । गढीमाई देवीको मन्दिर भएको गाउँलाई पनि सरकारले नर्कपालिका घोषणा गरिदियो ।
जहाँ एउटा ढगँको पूजा सामानको पसल छैन त्यो ठाउँलाई नर्कपालिका घोषणा गरिदिने सरकारको बुद्धि हेरेर रुनु किहाँस्नु ?कुनै दिन सरकारले भागँखाएर यो देशलाई चन्द्रमा या चन्द्रलोक घोषणा गरिदिन बेर छैन । त्यो बेला के यहाँकानागरिकले आफुलाई चन्द्रलोकको वासिन्दाभनेर गर्व गर्ने वामक्ख पर्ने कि? देश कै राजधानीधूवाँ र धूलोले पीडित छ ।
त्यहाँकाअधिकाशँनागरिक न्यूमोनिया र ब्रोकाँइटिस् रोगले ग्रसित छन् । के वीरगञ्ज र विराटनगरलाईपनिमहानर्कपालिका घोषणा गरेर राजधानी जस्तै रोगीहरुको शहर बनाउनखोजेको हो ?
हैन भने निर्वाचननसकिकनै वा सबै ठाउँको मत परिणाम नआउँदै महानर्कपालिका घोषणा गर्न सरकारलाई किनहतार पर्यो ?निर्वाचनअवधिभर कसैको सरुवा, बढुवा वाअन्य राजनैतिक निर्णय गर्न पाइन्दैन ।
तर यहीअवधिमा यो निम्छरो सरकारले तराईकादुईटा शहरलाई महानर्कपालिका घोषणा गरेको छ । त्यतिमात्रहो र दोस्रो चरणको निर्वाचननसकिन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले राजिनामापनिदिदैंछन् । हामीबच्चाहुंदा साउनमहिनामाझुलनलाग्थ्यो ।
अहिले सरकार आफैले जेठ महिनामाझुलन देखाउँदैछ । महानर्कपालिका घोषणा गर्न सरकारको हडबडी देखेर मधेशमाभोजपुरीमाबोलिने हडबडी के ब्याह कनपट्टी में सेनूर भन्ने कहावतलाई सम्झाइ रहेको छ । यति हडबडी किन?
महानर्कपालिका घोषणा भएपछि जमिनको भाउ बढने र जग्गाको दलालीगर्नेहरु बाहेक अरु कसैलाई केहीफाइदाहुन्न । महानर्कपालिकाबनेपनिजमिनकिनबेच गर्दा लाग्ने शुल्क बढनेछ । घर बनाउँदानक्शापास गर्नमालाग्ने पैसाले गाउँमा एउटा अर्को घर नै बन्न सक्दछ ।
महानर्ककावासिन्दाहरुले उपभोग गर्ने हरेक सेवा सुविधामा सरकारले चर्को शुल्कअसुल्ने छ । त्योबेलाअहिले आफ्नो महानर्कपालिकाबनेकोमावाह, वाहगर्नेहरु हाय, हायगर्दै सरकारलाई सराप्नेछन् । जुनशहरमा बाटोमा हिंडने बटुवाकालागि सडकपेटी छैन, जहाँ सार्वजनिकशौचालय छैन, अरु देशकानागरिकले आफ्नो खाजाको पैसा बचाएर बनाइदिएको घण्टाघरको उचितमर्मत, सम्भार छैन । यहाँको घडी संधै जसो बन्द रहेर शहरको विकासको मुख नै बन्द रहेको संकेत गर्दछ त्यो शहरलाई महानर्कपालिकाबनाउँदैमायहाँकानागरिकले खुशीहुनु पर्ने कुनै कारण छैन ।
अझ यो शहरको पतनको संकेत हो । अन्य देशको सरकारले आफुलाई जनताको सेवा सुविधामामात्र केन्द्रितगर्दछ । सरकारले निशुल्क स्कूल, कलेज र अस्पताल संचालन गरेर आफ्नानागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यउपलब्ध गराउँदछ ।
तर हाम्रो देशको सरकार जनसरोकारसँग जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ्यनीजि क्षेत्रलाई चलाउनदिएर आफु उद्योग खोल्छ र व्यापार गर्दछ । त्यहीभएर त सरकारले आफै संसदबाट अनुमतिनलिएरै २ अर्ब रुपैंयाको एलइडी बल्बभारतबाट आयात गरेर बेच्ने मनसाय देखाएको छ । आफै धामी, आफै झाँक्री जस्तो सरकार क्रेता र विक्रेतादुबै आफै बनेको छ ।
जनताको मतबाट निर्वाचितभएको सरकार, जनताले तिरेको करबाट चल्ने सरकार सेवक हैन व्यापारी र मालिक भएपछि कुै पनिशहरलाई कुनै पूर्वाधार निर्माण नगरेरै महानर्कपालिका घोषण गरिदिन्छ र हामी त्यस महानर्कपालिकाकावासिन्दाहुनपाएकोमाआफुलाई धन्य ठान्दै ङिच्चदाँत देखाउँदै सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं गौरवान्वित हुन्छौं ।